टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्री दाहालले होटल ताजमा भेटेको खुलासा – YesKathmandu.com
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको मोष्टवान्टेड सुचिमा टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको होटल ताजमा भेटेको रहस्य खुलेको छ । चार दिने भारत भ्रमणको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्रीे दाहालले नेपाल र भारतका ब्यवसायीहरुसँग होटल ताजमा भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यही कार्यक्रमको मञ्चमा आशिन थिए, नेपाल प्रहरीले विगत एक बर्षदेखि खोजि गरिरहेका फरार अभियुक्त रेशम चौधरी । प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनले त्यही मञ्चमा बारम्वार खानेखुसी पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अबधिभर चौधरी होटल ताजमै बसेका थिए । उनले त्यही प्रधानमन्त्री दाहालसँग छुट्टै भेटघाट गरेका थिएका थिए ।
टीकापुर नरसंहारका मुख्य योजनाकार चौधरी भारतमा लुकेर बसेका छन् । नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएलगतै उनी भारत पुगेका थिए । भारतमा बसेर उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव दिन थालेका छन् । होटल ताजमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग उनले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
कैलाली घटना राजनीतिक घटना हो, त्यसमा म दोषि पनि छैन, प्रधानमन्त्री दाहाललाई चौधरीले भने म प्रति लागेको मुद्दा फिर्ता लिइदिनु परयो । प्रधानमन्त्री दाहालले टीकापुर घटनाका बिषयमा आफुलाई जानकारी भएको र मुद्दा फिर्ताका लागि मन्त्रीपरिषदमा छलफल गर्ने जवाफ दिएका थिए ।
चौधरीलाई नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ प्रहरी र एक वालकको हत्या अभियोग, प्रहरीको हतियार खोसेको अर्काे गरी दुई मुद्दा लागेका छन् । यी दुवै मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई उनले आग्रह गरेका छन् भने मुद्दा फिर्ताले आश्वासन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको स्रोतले बताएको छ ।
टीकापुर घटनाको छानविन गर्न बनेको आयोगले पनि चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर गरेको छ । राष्टिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देविराम शर्मा नेतृत्वको छानविन समितिले उनलाई मुख्य दोषि ठहर गरेको छ । शर्मा नेतृत्वको छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपनि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने सार्वजनिक नगर्ने र अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने बताएका छन् ।
गृहमन्त्रीको कार्यप्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय असन्तुष्ट बनेको छ ।
One thought on “टीकापुर नरसंहारका मुख्य अभियुक्तलाई प्रधानमन्त्री दाहालले होटल ताजमा भेटेको खुलासा”
प्रम भए पनि जनयुद्ध कालदेखिको साथि होला अनि भेट्न नपाउनु ? जे होस् यो पनि मावोबादी कार्य कर्ता रहेछ भन्ने थाहा भयो / टिकापुर घटनामा मावोबादी संलग्न छन् भनेर धेरैले आरोप लगाए मैले पत्त्याइन / आखिर हो रहेछ / १० चोटी टिबिमा देखिएको मान्छे कसले चिन्दैन ? जनता बेकुप बनाउने पुरानै सैली हो / उप-प्रम बिमलेन्द्र निधि तिनै हत्यारालाई मुद्दा लगाउन हुदैनन् भन्दैछन / प्रचण्ड दर्सन भेट दिन्छन / नेपाल त खत्तम भयो / हत्त्यारालाई नै साथ् दिन्छन प्रम र मन्त्रिहरु / पुलिस मार्नेलाइ त् स्वागत गर्छन मन्त्रि र प्रधान मन्त्रि , अनि कसरि पाउने जनताले न्याय ? सुन्दै अचम्ब छ / अलिकता दया माया अनि मानबिय समबेदना रहेनछ / ९ जनाको परिबार अहिले सम्म रोहेर बाँचेका छन् / अझै पनि न्याय पाउने आशमा छन् /
घुस लिँदालिँदै सवइञ्जिनियर पक्राउ
मर्निङ वाकमा निस्केका एमाले नेता रामनरेश यादवको विभत्स हत्या
बालकृष्ण ढंगेललाई पक्राउ गर्न प्रहरीको उच्चतहमा छलफल